Bogotá gbagoro n'elu ogo 50 ụwa dị ka International Congress and Convention Association si kwuo
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Colombia » Bogotá gbagoro n'elu ogo 50 ụwa dị ka International Congress and Convention Association si kwuo
Nwere ike 9, 2018
Bogotá kpaliri nọmba 14 na akụkọ International Congress and Convention Association (ICCA) nke afọ a. Na-aga elu 14 ebe 45Nke.Obodo ahụ nwekwara ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bịara maka ihe omume na mpaghara ahụ, yana ngụkọta nke ndị mmadụ 52,868. Nsonaazụ ọma a na - abịa n'ihu nzukọ nzukọ nzukọ South America na - akwado nzukọ BestCities Global Forum kwa afọ n’afọ a.
The Best City Alliance na-ekweta Houston na Vancouver, bụ ndị mere ngagharị dị ukwuu na akụkọ ahụ, na-arịgo 38 n'ebe 148th na 16 ebe 39th karị. Ọnọdụ ndị ka mma maka obodo atọ a na-anọdụ n'akụkụ ọganiihu nke ndị mmekọ BestCities ndị ọzọ; Berlin (4th), Singapore (6th) na Madrid (7th), bụ ndị jikọtara ọnọdụ ha n'ime 10 kacha elu, na-edebe ọnọdụ ha ugbu a kemgbe 2016.
Ikwu okwu banyere ndị mmekọ ya nke ọma, Paul Vallee, Onye isi nchịkwa nke BestCities kwuru, sị:
“Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ ọtụtụ n’ime ndị mmekọ anyị na-arụ ọrụ nke ọma na mkpesa ICCA 2017. Dika ntaneti mba uwa nke ndi isi ochichi iri na abuo n’uwa nile, ihe ndia n’enye aka anyị ikwekọ na ndị otu mba ụwa na arịrịọ ka ị gaa ebe ọ bụla.
“Site na ngụkọta nke nzukọ 1,072 anabatara na 2017, njikọ aka anyị anaghị ewepụta ihe kachasị mma maka ọtụtụ mkpakọrịta otu klaasị ụwa, n’afọ, n’afọ.
“Obi dị anyị ụtọ ịhụ Bogotá ka ọ wụsara ebe iri na anọ n’afọ nke ha ga-anabata nzukọ Global Forum anyị. Dị ka oge niile, anyị na-agbasi mbọ ike inyere ndị ahịa aka ịmepụta mmetụta dị mma ma na-adịgide adịgide gafee ụlọ ọrụ ahụ ma nwee olile anya isiokwu afọ a, Ike nke Ndị Mmadụ, ga-enyere anyị aka imezu nke a na ọkwa ọhụrụ.
Jorge Mario Díaz nke Greater Bogotá Convention Bureau kwuru, sị:
“Erlọ Ọrụ Mgbakọ Kasịnụ nke Bogotá nọ na-agbalịsi ike itolite na ịzụlite ụlọ ọrụ mmemme ya ma nwee mbọ obodo ahụ ka amata na ọkwa ICCA bụ nnukwu mmeta nke atụmatụ etinyere na ihe akaebe na ịrụsi ọrụ ike nke otu ahụ.
Nsonaazụ a gosipụtara arụmọrụ nke usoro ịzụ ahịa obodo na mma nke mmemme nke anyị bidoro afọ atọ gara aga, nke ndị Chamber of Commerce, Greater Bogotá Convention Bureau na Gọọmenti Obodo na-edu.
“Bogotá bụ ebe dị iche iche na -eche ihu igwe nwere ike ime ọtụtụ nzukọ mkpakọrịta.
“N’afọ a anyi nwere obi uto ịnabata BestCites Global Forum ma nwee ọhụhụ ịnabatakwa obodo ibe anyị na ndị nnọchi anya ime mmemme, Ike Ndị Mmadụ Anyị na-eche na ihe omume a ga-abụ ihe ngosipụta dị mkpa maka nnukwu afọ Bogotá. ”
PACTO na IMEX: Gini mere nzuko, Ntughari, Mgbakọ na Ngosiputa (MICE) na Indonesia bu maka PACTO?
Ileta Ottawa? Na-achọ ụlọ nkwari akụ Ottawa? Le Germain Hotel Ottawa nwere ike ịbụ nhọrọ gị…
East Africa Community nwere oke njem na ọrụ
Southwest Airlines laghachi Costa Rica na June
Boeing kwere nkwa $ 10 maka nzaghachi COVID-19 nke India